ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒို မလုပျနိုငျတဲ့ မကျဆီရဲ့ ခွားနားထူးခြှနျတဲ့ ထူးခွားတဲ့အမူအကငျြ့ကို ခြီးကြူးလိုကျတဲ့ အှနျနရီ – Sports A2Z
လူအတျောမြားမြားရဲ့မွငျကှငျးထဲမှာ မကျဆီရဲ့ပုံရိပျတှေ၊ အလိမျအခေါကျတှေ၊ နဲ့ ဘောလုံးကစားပုံတှကေ ပွောငျမွောကျလှနျးလို့ ဖြောကျဖကျြပဈလို့ မရအောငျကို စှဲတငျကနျြရဈပွီး လှမျးမိုးထားတယျဆိုတာ ငွငျးဆနျလို့ မရပါဘူး။ သူ့ကို မကွိုကျတဲ့သူ ဆိုရငျတောငျမှ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားအဖွဈ လကျခံထားရပါတယျ။
လကျရှိ အသကျ ၃၃ နှဈအရှယျ မကျဆီဟာ ဒီရာသီလာလီဂါမှာ ၂၆ ပှဲကစားပွီး ၂၃ ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီးမှု ၈ ကွိမျနဲ့ ငယျမူငယျသှေး​ခွစှေမျးကို ကွရှလှနျးစှာ ဆကျလကျပွသနဆေဲဖွဈတာကို မွငျတှရေ့နရေတယျ။
တကယျ့ကို ရှားရှားပါးပါး ကစားသမားတှထေဲက ထူးခွားတဲ့ကစားသမားတယောကျဖွဈတဲ့ မကျ​ဆီရဲ့ အရှမှေ့ာ မလဲပွိုခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစဈမှူးဆိုတာ လကျခြိုးရရေငျတောငျ လကျတဖကျပွညျ့ဖို့ အတျောခဲယဥျးမှာပါ။ သူ့ရဲ့ မှေးရာပါ ဘောလုံးပါရမီက တခတျေမှာတယောကျအနနေဲ့ ဘောလုံးလိမျခေါကျကြျောဖွတျမှုမှာ ဆရာတဆူအဖွဈ သတျမှတျရမှာပါ။
ဘောလုံးကို ဆှဲတကျလာတဲ့ မကျဆီကို တားဆီးဖို့ကွိုးစားရငျး ဖငျထိုငျလကျြလဲကခြဲ့တဲ့ ဘိုတနျရဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈက အရှကျရဖှယျဖွဈရပျက အကြျောကွားဖွဈခဲ့ပွီး ဒါက အကောငျးဆုံးသကျသဖွေဈပါတယျ။
မကျဆီရဲ့ထူးခွားခကျြက ဒီစှမျးရညျကို ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့ ပရိသတျရှမွေ့ငျကှငျးမှာမှ ထုတျဖျောအသုံးခတြာမဟုတျဘဲ ပရိသတျမမွငျသိနိုငျတဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျမှာလညျး ကောငျးကောငျး အသုံးခတြယျလို့ သိရတာပါ။
ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာဆာအသငျးဖျော သီယာရီ အှနျနရီက မကျဆီဟာ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ လိမျခေါကျကြျောဖွတျနရေငျး ပွဈဒဏျအကြူးလှနျခံရလို့ နညျးပွက ပွဈဒဏျဘော မသတျမှတျပေးရငျတောငျ ဒေါသကွီးတတျလရှေိ့ကွောငျး ဆိုခဲ့ပွီး ဖွဈရပျမှနျတခုကိုလညျး အခုလို ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
ဂိုးသမားဆီ ဘောလုံးပွနျရောကျသှားတော့ မကျဆီက ဘောလုံးပွနျဆငျးတောငျးတယျ။ ဂိုးသမားက သူ့ကို ဘောလုံး ထိုးပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ မကျဆီက တသငျးလုံးကို လိမျခေါကျ ကြျောဖွတျပွေးပွီး အငွိုးတကွီးပုံစံနံ့ ဂိုးသှငျးပဈတော့တာပဲဗြာ။
ကြှနျတျောအနနေဲ့ဆိုရငျတော့ ဒါမြိုးကို ကြောငျးတုနျးက ဘောလုံးကှငျးမှာ လုပျလရှေိ့တာပေါ့ဗြာ။ ကလေးငယျလေးတှနေဲ့ ဘောလုံးကစားရငျလညျး အလှအပလေးတှေ လုပျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ဗြာ။ မကျဆီက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားကွီးတှကေိုမှ လုပျပွသှားတာဗြ။ ယာယာ တိုရေး၊ ပူယိုးလျ၊ ဇာဗီ၊ အငျနယေကျစတာ၊ ဘူးစကှကျဈတို့လို ကစားသမားတှကေို ပကျလကျလနျအောငျ လုပျသှားတာဗြာ။ ပွီးတော့ဗြာ…. တခါတလလေုပျတယျမထငျနဲ့နျော။ ခဏခဏကို လုပျလရှေိ့တာပေါ့ဗြာ။
ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုကရော ဒါမြိုးလုပျလရှေိ့သလားဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောမ​မွငျဖူးပါဘူး။ ကြှနျတျောက ဇီဒနျး၊ ရျောနယျဒငျညိုတို့နဲ့လညျး အတူကစားဖူးပမေယျ့ သူတို့လညျး ဒီလိုမလုပျကွပါဘူး။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ မကျဆီဟာ ကြှနျတျောတို့ တှမွေ့ငျဖူးတဲ့ ဘယျကစားသမားမြိုးနဲ့ မတူညီတဲ့သူ၊ သီးသနျ့ကှဲထှကျနတေဲ့ ခွားနားထူးခြှနျတဲ့သူဆိုတာကို သဘောပေါကျခဲ့တာပါ။
လူအတော်များများရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာ မက်ဆီရဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ အလိမ်အခေါက်တွေ၊ နဲ့ ဘောလုံးကစားပုံတွေက ပြောင်မြောက်လွန်းလို့ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရအောင်ကို စွဲတင်ကျန်ရစ်ပြီး လွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတာ ငြင်းဆန်လို့ မရပါဘူး။ သူ့ကို မကြိုက်တဲ့သူ ဆိုရင်တောင်မှ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားအဖြစ် လက်ခံထားရပါတယ်။
လက်ရှိ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် မက်ဆီဟာ ဒီရာသီလာလီဂါမှာ ၂၆ ပွဲကစားပြီး ၂၃ ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု ၈ ကြိမ်နဲ့ ငယ်မူငယ်သွေး​ခြေစွမ်းကို ကြရွလွန်းစွာ ဆက်လက်ပြသနေဆဲဖြစ်တာကို မြင်တွေ့ရနေရတယ်။
တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး ကစားသမားတွေထဲက ထူးခြားတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ မက်​ဆီရဲ့ အရှေ့မှာ မလဲပြိုခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစစ်မှူးဆိုတာ လက်ချိုးရေရင်တောင် လက်တဖက်ပြည့်ဖို့ အတော်ခဲယဉ်းမှာပါ။ သူ့ရဲ့ မွေးရာပါ ဘောလုံးပါရမီက တခေတ်မှာတယောက်အနေနဲ့ ဘောလုံးလိမ်ခေါက်ကျော်ဖြတ်မှုမှာ ဆရာတဆူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ဘောလုံးကို ဆွဲတက်လာတဲ့ မက်ဆီကို တားဆီးဖို့ကြိုးစားရင်း ဖင်ထိုင်လျက်လဲကျခဲ့တဲ့ ဘိုတန်ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က အရှက်ရဖွယ်ဖြစ်ရပ်က အကျော်ကြားဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒါက အကောင်းဆုံးသက်သေဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ထူးခြားချက်က ဒီစွမ်းရည်ကို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ပရိသတ်ရှေ့မြင်ကွင်းမှာမှ ထုတ်ဖော်အသုံးချတာမဟုတ်ဘဲ ပရိသတ်မမြင်သိနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာလည်း ကောင်းကောင်း အသုံးချတယ်လို့ သိရတာပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဆာအသင်းဖော် သီယာရီ အွန်နရီက မက်ဆီဟာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ လိမ်ခေါက်ကျော်ဖြတ်နေရင်း ပြစ်ဒဏ်အကျူးလွန်ခံရလို့ နည်းပြက ပြစ်ဒဏ်ဘော မသတ်မှတ်ပေးရင်တောင် ဒေါသကြီးတတ်လေ့ရှိကြောင်း ဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်တခုကိုလည်း အခုလို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးသမားဆီ ဘောလုံးပြန်ရောက်သွားတော့ မက်ဆီက ဘောလုံးပြန်ဆင်းတောင်းတယ်။ ဂိုးသမားက သူ့ကို ဘောလုံး ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မက်ဆီက တသင်းလုံးကို လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ်ပြေးပြီး အငြိုးတကြီးပုံစံနံ့ ဂိုးသွင်းပစ်တော့တာပဲဗျာ။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးကို ကျောင်းတုန်းက ဘောလုံးကွင်းမှာ လုပ်လေ့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ ဘောလုံးကစားရင်လည်း အလှအပလေးတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ။ မက်ဆီက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားကြီးတွေကိုမှ လုပ်ပြသွားတာဗျ။ ယာယာ တိုရေး၊ ပူယိုးလ်၊ ဇာဗီ၊ အင်နေယက်စတာ၊ ဘူးစကွက်စ်တို့လို ကစားသမားတွေကို ပက်လက်လန်အောင် လုပ်သွားတာဗျာ။ ပြီးတော့ဗျာ…. တခါတလေလုပ်တယ်မထင်နဲ့နော်။ ခဏခဏကို လုပ်လေ့ရှိတာပေါ့ဗျာ။
ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုကရော ဒါမျိုးလုပ်လေ့ရှိသလားဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်မ​မြင်ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဇီဒန်း၊ ရော်နယ်ဒင်ညိုတို့နဲ့လည်း အတူကစားဖူးပေမယ့် သူတို့လည်း ဒီလိုမလုပ်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မက်ဆီဟာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ဖူးတဲ့ ဘယ်ကစားသမားမျိုးနဲ့ မတူညီတဲ့သူ၊ သီးသန့်ကွဲထွက်နေတဲ့ ခြားနားထူးချွန်တဲ့သူဆိုတာကို သဘောပေါက်ခဲ့တာပါ။